Biography – Family Of Films
Hands of Stone (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Hands of Stone (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး လက်ဝှေ့အားကစားချစ်သူများအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ… Hands of Stone (2016) သည် IMDb 6.6/10 Rotten Tomatoes 45% Roger Ebert 2/4 Google users 85% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Jonathan Jakubowicz ကိုယ်တိုင်ရေးသားရိုက်ကူးထား၍ သရုပ်ဆောင် : Edgar Ramírez, Usher Raymond, Robert De Niro တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action,Biography, Drama ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. လက်ဝှေ့လောကရဲ့ ထူးခြားတဲ့ Roberto Duran နဲ့ သူရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဆရာ Ray Arcel တစ်ယောက်ဘဝ တစ်ယောက် ပြောင်းလဲပေးကြတဲ့အခါ ဘယ်လို အက်ရှင်ဒရာမာခန်းတွေ တွေ့ရမလဲ ဇာတ်ကားမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြည့်ကြပါခင်ဗျာ… Reviewed ...
Main Aur Charles (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Main Aur Charles (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး Main Aur Charles (2015) သည် IMDb 6.3/10 Times of India 3/5 Google users 78% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Prawaal Raman ကိုယ်တိုင်ရေးသားရိုက်ကူးထား၍ သရုပ်ဆောင် Adil Hussain, Alexx O'Nell, Anastasia Fullfina တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Biography, Crime ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. ထောင်ကနေ လွတ်မြောက်လာပြီးနောက် အရမ်းဆိုးသွမ်းပြီး လူသတ်မှု ဆက်တိုက်ကျူးလွန်နေ လူသတ်သမားထောင်ထွက်ဟာ နိုင်ငံအနှံ့ လူမုဆိုးတစ်ယောက်လို ပစ်မှတ်ထားလာတဲ့အခါ သူ့ကို ဖမ်းဆီးရန် ရိုးသားတဲ့ရဲအရာရှိတစ်ယောက်က ဆုံးဖြတ်လိုက်လေရာ ဘယ်လို အက်ရှင်ဇာတ်လမ်းကောင်းဖြစ်လာမလဲ ဇာတ်ကားမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားကြည့်ကြပါခင်ဗျာ… Reviewed by Win Kyaw Thu Reviewed by ...
Dangal (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Dangal (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 8.6/10 CSFD 87% Rotten Tomatoes 92% Google User 89 % Genre: Action, Biography, Drama Run Time: 2h 41min တစ်ကားရိုက်ရင် အတွေးတွေ အများကြီးပေးတတ်တဲ့ မင်းသားကြီး Aamir Khan ရဲ့ ဇာတ်ကားဟောင်းပါ ကျွန်တော် အရမ်းကြိုက်လွန်းလို့ တင်လိုက်တာပါခင်ဗျာ…. "….မနက်ဖန် မင်းနိုင်ရင် မင်းတယောက်တည်း မဟုတ်ဘူး သန်းနဲ့ချီ မိန်းခလေးတွေ မင်းနဲ့အတူ အနိုင်ရမှာ သူတို့ထက် အားနည်းတယ်လို့ ထင်နေတဲ့ ယောက်ျားတွေကို မိန်ခလေးတွေ အနိုင်ရလာလိမ့်မယ် အိမ်ထောင်မှုတွေလုပ်ဖို့ အတင်းစေခိုင်းသူတွေ အရွယ်မတိုင်ခင် လက်ထပ်ပြီး ခလေးမွေးနေရသူတွေပေါ့ မနက်ဖြန်ပွဲက အရေးအကြီးဆုံး အရာတခုပဲ မနက်ဖြန် သြစတြေးလျနဲ့တိုက်ခိုက်ရုံပဲ မဟုတ်ဘူး အဲဒီလို မိန်းခလေးတွေကို နိမ့်ကျတယ်လို့ထင်တဲ့ သူတွေကိုပါ တိုက်ခိုက်ရမှာ…" Dangal (2016) သည် IMDb 8.6/10 CSFD 87% Rotten Tomatoes 92%Googluse User 89% ရထားသော ...
Hidden Figures (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး Hidden Figures (2016) သည် IMDb 7.8 Roger Ebert 3.5/4 Rotten Tomatoes 93% Goggle USers 93% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Theodore Melfi ရိုက်ကူးထား၍ Prakash Kapadia, Sanjay Leela Bhansali တို့ကဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Biography, Drama, History ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. အစောပိုင်းအမေရိကန် အာကာသအစီအစဉ်အတွင်း နာဆာ၏ အဓိကနေရာတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာ အာဖရိကန် အမေရိကန် အမျိုးသမီး သင်္ချာပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ သမုိုင်းကြောင်းနောက်ခံ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်မို့ ခံစားကြည့်လိုက်ကြပါစို့လားဗျာ…. Review By ...
Jewel in the palace (2003-2004) Korea TV Series မြန်မာစာတန်းထိုး
Jewel in the palace (2003-2004) Korea TV Series မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings : 8.6/10 Google User 92% Genre: Biography, Drama, History Run Time : 1 hour ချန်ဂင်လို့ပြောလိုက်ရင် ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းချစ်သူတော်တော်များများ သိရှိကြမယ့် နာမည်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်က မြဝတီရုပ်သံလိုင်း ကနေ ညနေ ၇ နာရီမှာ ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာသာမက အာရှနိုင်ငံတော်တော်များများမှာ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကိုရီးယားအနုပညာရေလှိုင်းကို အာရှတစ်ခွင်ပျံ့နှံ့သွားစေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း ၅၄ ပိုင်းလုံးက ပရိသတ်ကိုတစ်ချက်မှ မငြီးငွေ့ရစေဘဲ ဇာတ်သိမ်းအထိ ဆွဲခေါ်သွားနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ လောက်က ဂျိုဆွန်းခေတ်မှာ ရာထူးကြီးငယ်အလိုက် ရိုသေလေးစားမှုနဲ့ အမျိုးသားတွေက လွှမ်းမိုးတဲ့လူမှုအသိုက်အဝန်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ...
Braveheart (1995) မြန်​မာစာတန်းထိုး
Braveheart (1995) မြန်​မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 8.4/10 Rotten Tomatoes : 78 % Google User : 90% Genre: Biography, Drama, History Run Time:2hours 58 mins Braveheart (1995) သည် IMDb 8.4 Rotten Tomatoes 78% Google User 90 % ရထားသော ဒါရိုက်တာ Mel Gibson က ရိုက်ကူးထား၍ Randall Wallace က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးထားကာ သရုပ်ဆောင် Mel Gibson, Sophie Marceau, Patrick McGoohan တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Biography, Drama, History ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. Sir William Wallace သည် သူ၏လျှို့ဝှက်သတို့သမီးကို ...
The Imitation Game (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Imitation Game (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 8.0/10 Rotten Tomatoes : 91% Google User :92% Genre: Biography, Drama, Thriller Run Time:2hour 55 mins The Imitation Game (2014) သည် IMDb 8.0 Rotten Tomatoes 91% Google User 92 % ရထားသော ဒါရိုက်တာ F Morten Tyldum က ရိုက်ကူးထား၍ Graham Moore, Andrew Hodges တို့က ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Biography, Drama, Thriller ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ...
Hacksaw Ridge (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Hacksaw Ridge (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings:8.2/10 Rotten Tomatoes 86% Google User : 93% Genre: Biography, Drama, History Run Time:2hours 19 mins Hacksaw Ridge (2016) ) IMDb 8.2 Rotten Tomatoes 86% Google User 93% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Mel Gibson က ရိုက်ကူးထား၍ Robert Schenkkan , Andrew Knight တို့က ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Andrew Garfield, Sam Worthington, Luke Bracey တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Biography, Drama, History ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ.. ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင် အမေရိကန်စစ်တပ်မှာ Medic ...
Megan Leavey (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး
Megan Leavey (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings : 7.1/10 Rotten Tomatoes : 84% Genre: Biography, Drama, War Run Time : 1 hour 56 mins Megan Leavey (2017) ဇာတ်ကားလေးသည် IMDb 7.1 Rotten Tomatoes 84 % ရထားသော ဒါရိုက်တာ Gabriela Cowperthwaite ရိုက်ကူး၍ Pamela Gray, Annie Mumolo တို့က ရေးသားထားကာ သရုပ်ဆောင် Kate Mara, Ramon Rodriguez, Tom Felton တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Biography, Drama, War ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားမို့ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ… ငယ်ရွယ်သော မရိမ်းတပ်ကြပ်တစ်ယောက်၏ တကယ့်ဖြစ်ရပ်ကို ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်သည် အိရတ်တွင် တပ်ချထားစဉ်အတွင်း သူမရဲ့ စစ်ဖက် ...
A Beautiful Mind (2001) မြန်မာစာတန်းထိုး
A Beautiful Mind (2001) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings : 8.2/10 Rotten Tomatoes : 93% Genre: Biography, Drama Run Time :2hours 15 mins A Beautiful Mind (2001) ဇာတ်ကားသည် IMDb 8.2 Rotten Tomatoes 93% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Ron Howard ရိုက်ကူး၍ Akiva Goldsman ဇာတ်ညွှန်းရေားသား၍ Sylvia Nasar ရေးသားထားသော စာအုပ်ကို သရုပ်ဆောင် Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Biography, Drama ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားမို့ ချစ်ခြင်းအာဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ အရမ်းတော်ပြီး ဆိုရှယ်ကျသော သချာင်္ပညာရှင်r John Nash က စကားဝှက်ရေးသားဖော်ထုတ်ခြင်း လျှိ့ဝှက်အလုပ်ကိုလက်ခံလိုက်သောအခါ ...
Lion (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Lion (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings : 8.1/10 Rotten Tomatoes : 92% Genre: Biography, Drama Run Time : 1 hour 58 mins Lion (2016) ဇာတ်ကားသည် IMDb 8.1 Rotten Tomatoes 92% ရထားပြီး ဒါရိုက်တာ Garth Davis ရိုက်ကူး၍ Saroo Brierley ရေးသားသော "A Long Way Home" ကို Luke Davies ဇာတ်ညွှန်းရေးသားထားကာ သရုပ်ဆောင် Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mar တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Biography, Drama ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားမို့ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. ငါးနှစ်သား အိန္ဒိယကောင်လေးတစ်ယောက်သည် အိမ်နှင့် ကီလိုမီတာထောင်ချီဝေးသော ကလကတ္တားလမ်းမပေါ်တွင် လမ်းပျောက်နေလေသည် သူ့ကို သြစတြေးလျား စုံတွဲက ...
Kiss and Cry (2017) မြန်​မာစာတန်းထိုး
Kiss and Cry (2017) မြန်​မာစာတန်းထိုး IMDb - 7.5/10 Rotten Tomatoes 67% Type - Biography, Drama, Music Time - 1h 35min Kiss and Cry (2017) ဇာတ်ကားလေသည် IMDb 7.5 Rotten Tomatoes ရထားသော Biography, Drama, Music ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားမို့ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ… Carley Allison ရဲ့ဇာတ်လမ်းကို အခြေခံရိုက်ကူးထားသော အချစ်ဒရာမာဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါသည်… အသက် ၁၈ နှစ်ရွယ် စကိတ်သမား အဆိုတော် တစ်ယောက် အတ္တုပ္ပတိ ဘဝအခက်အခဲ အချစ် အလွမ်းတွေကို ရသပေါ်အောင် ဘယ်လိုရိုက်ကူးထားသည်ကို ဇာတ်ကားမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါလို့ Review by : Win Kyaw Thu Translated - mgz Encoded by Win Kyaw Thu